1.Website Blog မှာ Copy မရတာကို ရအောင်လုပ်မယ်။|2..ပိတ်ထားသောဆိုက်ကို ဘယ်လိုဝင်မလဲ Simple way|3.Web Page များကို PDF ဖိုင်အဖြစ် သိမ်းခြင်း|(4) Microsoft Word, Excel, Powerpoint များ e-mails နှင့် websites များကို PDF သို့ ပြောင်းလဲပေးနည်း|5.Google Web History Check in Gmail ~ ITmanHOME
15:55 blog, နည်းပညာ No comments
1.Website Blog မှာ Copy မရတာကို ရအောင်လုပ်မယ်။|2..ပိတ်ထားသောဆိုက်ကို ဘယ်လိုဝင်မလဲ Simple way|3.Web Page များကို PDF ဖိုင်အဖြစ် သိမ်းခြင်း|(4) Microsoft Word, Excel, Powerpoint များ e-mails နှင့် websites များကို PDF သို့ ပြောင်းလဲပေးနည်း|5.Google Web History Check in Gmail
Website Blog မှာ Copy မရတာကို ရအောင်လုပ်မယ်။
Blog မှာ Copy မရတာရအောင်လုပ်မယ် ဆိုတာလေး တင်ချင်နေတာတော့ကြာပါပြီး အခုတလော
ရေးမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်လေးဘဲ ထားပြီးမရေးဖြစ်တဲ့ ပိုစ့်ပေါင်း ၁၀ ကျော်နေပြီး ဒီလိုများတော့လဲ ပိုပြီး
ဆိုးတယ်. ရေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီး ခေါင်းထဲမှာ ရှုပ်နေပြီး ဘာမှကို Idea မရတော့ဘူး။
ဘာမှကို မရေးဖြစ်မေးထားတာတွေလဲ ပြန်မဖြေဖြစ် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ဒီပိုစ့်လေးကို
မေးလာတဲ့ လူရှိတာနဲ့ စိတ်ထားမှာရေးခြင်နေတာနဲ့ တော်ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မကောင်းတဲ့
နည်းပညာလားလို့ဘဲ..ဒါပေမဲ့လဲ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာက အသုံးပြုတဲ့ လူပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး
ပြောင်းလဲသွားတာမို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကို ကြည့်မနေတော့ဘဲ ကိုယ်သိထား
တဲ့ နည်းပညာလေးကို ပြန်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Blog တွေကို ၀င်လိုက်ရင် Right Click Disable ဖြစ်နေတာတို့ စာသားတွေကို Select လုပ်
လို့မရတာတို့ ကြုံဘူးကျမှာပေါ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Download လုပ်ခြင်ပေမဲ့ မရတာတို့ပေါ့ ဒါတွေကို
ဖြေရှင်းရမဲ့ နည်းလမ်းက အခက်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကူးချင်ပြီး ကူးလို့မရတဲ့ Blog ကို
Browser (Internet Explorer,Firefox,Chrome) မှာ File Menu >> Save Page as ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့
Desktop မှာ save ပေါ့။ ပြီးတဲ့ အခါမှာ Desktop ကိုသွားပြီး Download ရလာတဲ့ Blog page လေးကို
Right click - Open with Microsoft Word ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. အေးအေးဆေးဆေး copy လို့ရပါပြီး။
Font တွေမတူဘူးဆိုရင် အားလုံး Select မှတ်ပြီး Font မှာ zawgyi or myanmar3ကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့။
ဒီ Blog က ပုံတွေကိုပါ Save ထားတဲ့ Desktop မှာ Folder လေးတဲ့ ဒီ Blog ရဲ့နာမည်နဲ့ တွေ့ပါမယ်။
အဲဒီအထဲမှာ Blog ထဲက ပုံတွေရော Script တွေရော အစုံပလုံကို အေးအေးဆေးဆေး ရယူလို့
ဆိုတာကို ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
for everyone www.4shared.com က သိတဲ့အတိုင်းပဲ ပိတ်ထားတယ်လေ။ အဲဒီတော့ အခုလို ၀င်လိုက်တယ်။
Start>Run ထဲမှာ cmd လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ping www.4shared.com ဆိုပြီး ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ Pinging www.4shared.com [72.233.72.144] with 32 bytes of data: ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီ့ 72.233.72.144 က 4shared ရဲ့ IP လေ။ Firefox ကိုဖွင့်ပြီး address bar မှာ 72.233.72.144 လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တာ 4shared.com Site ကြီး ပွင့်လာပါရော။ တခြားပိတ်ထားတဲ့ Site တစ်ချို့ကိုလည်း ဒီနည်းလေးနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ။
Web Page များကို PDF ဖိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားခြင်း
အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ PDF အဖြစ် ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းရန်မှာ Software များစွာရှိသည့်အနက်မှ လွန်စွာ လွယ်ကူလျင်မြန်လှသော software တစ်ခုမှာ CutePDF Creator ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ CutePDF Software မှာ အခြားသော Print ထုတ်ယူနိုင်သော Software များစွာမှလည်း PDF ပြောင်းပေးနိုင်ပါသေး သည်။ အသုံးပြုပုံမှာ Print ထုတ်ယူလိုသော Website အား ဖွင့်ထားပြီး File Menu မှ Print ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး ဆက်လက်၍ Printer Name Box ထဲတွင် CutePDF Writer ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး OK ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် PDF File တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Free Download (1.6 MB) (Vista Ready)
doPDF Software သည် Free Converter version တစ်ခုဖြစ်ပြီး
တစ်ကိုယ်ရေသုံးနှင့် လုပ်ငန်းသုံးနှစ်မျိုး စလုံးအတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။
ယင်း program ကို အသုံးပြု၍
သင့်ရဲ့ Microsoft Word, Excel, Powerpoint များကို PDF သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရုံသာမက
e-mails နှင့် အခြားသင်နှစ်သက်ရာ websites များကိုလည်း PDF သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပေသေးသည်။
Web History လေးကြည့်ရအောင်
Google က ကျွန်တော်တို့ mail ကို Sign in ဝင်ပြီးတာနဲ့ Google Search မှာ ကိုယ် ကြည့်သမျှ Site အားလုံးကို မှတ်တော့တာပဲ ။
ပြီးလို့ Google Account Setting က Web History မှာ ပြန်ကြည့်ကြည့် ကို သွားသမျှ လင့် အားလုံး ကျန်နေမှာပဲ
Google History က သိထားသင့်တဲ့ Web site လေးတစ်ခုပါပဲ ဒါကြောင့်
Gmail Acc နဲ့Sign in ၀င်ပြီးရင် ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်က ဘယ် Site တွေကြည့်ခဲ့တယ်
ဘာတွေ Download ဆွဲခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ History ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ သဘောပါ
Google Web history ဆိုတာက google search box ထဲမှာ ရိုက်ပြီးရှာထားတဲ့ History တွေကိုပဲ မှတ်ထားတာပါ
အပေါ်က URL Bar (or) Address bar ကနေ http://www.ဘာညာ.com ဆိုတာတွေမှတ်မထားနိုင်ပါဘူး
၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ချင်းစီအလိုက်မှတ်သားသိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် photobrowser လို မျိုး timeline view တစ်ခုထည့်သွင်းချပေး ထားတာကြောင့် ဘယ်အချိန်က ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ တယ် ဆိုတာကိုမှန်းဆကာ Review နဲ့ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ WebMynd ထဲမှာမှတ်သားသိမ်းဆည်းထားမှုမပြုစေလိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေရှိပါကလည်း extensionmenu ထဲမှာသတ်မှတ်ပေးထားနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်
Web History ကို အသုံးပြုပြီး Gmail ဒါမှမဟုတ် Google Services တစ်ခုခုသုံးထားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ် Websit တွေကို ဘယ်စကားလုံးတွေ သုံးပြီး Google Search မှာ ရှာသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..